Gịnị bụ PCI Compliance na gịnị kpatara o ji dị mkpa maka Ecommerce gị | ECommerce ozi ọma
Gịnị bụ PCI Compliance na gịnị kpatara o ji dị mkpa maka Ecommerce gị
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na a ebe nrụọrụ weebụ e-commerce nwere ike ịmaworị okwu ahụ PCI Nkwado, agbanyeghị, ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịghọta ihe ọ pụtara n'ezie maka azụmaahịa ha n'ịntanetị. Ya mere, n'okpuru anyị ga-ekwu ntakịrị ihe ọ bụ Nkwado PCI na ihe kpatara o jiri dị mkpa maka Ecommerce gị.
1 Gịnị bụ PCI Compliance?
2 Nkwekọrịta PCI metụtara azụmahịa ọ bụla
Gịnị bụ PCI Compliance?
Mbụ ị ga-aghọta nke ahụ Nkwado PCI abụghị iwu gọọmentị ma ọ bụ ụkpụrụ. Aha ya ziri ezi bu PCI DSS, nke putara "ulo oru ugwo ugwo - Standard Security Standard" na nke na-ezo aka na ọkọlọtọ nke nwere usoro nchekwa nke ndị ahịa niile, nnukwu ma ọ bụ obere, ga-agbaso.
Ọ bụla ahịa ga-esoriri na Nkwenye PCI, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị ijikwa ọtụtụ azụmahịa ma ọ bụ jiri ndị na-eweta ndị ọzọ ka outsource kaadị akwụmụgwọ ozi. Maka ndị ahịa ahụ na-enyefe usoro ịkwụ ụgwọ ha, ogo nke PCI pere mpe na nyocha nkwenye dị ntakịrị.
Nkwekọrịta PCI metụtara azụmahịa ọ bụla
Ọtụtụ Ndị na-ere ahịa ecommerce na-eche na Nkwekọrịta PCI anaghị emetụta azụmaahịa ha dika ha pere mpe. N'ezie, ụkpụrụ a metụtara azụmahịa ọ bụla na-ahazi, na-echekwa ma ọ bụ na-ebufe data kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụrụ na, dị ka onye njikwa nke ụlọ ahịa Ecommerce, ị naghị ewere nchekwa dị oke mkpa ma na-ata ahụhụ site na mbanye anataghị ikike na izu ohi nke ozi ndị ahịa, ị nwere ike iche nsogbu dị egwu.
N'ihi ya Nkwado PCI dị mkpa ma ọ bụrụ na anabatara ịkwụ ụgwọ kaadị kredit, yabụ ọ bụrụ na agbasaghị ihe ndị a chọrọ wee zute ha, ị nwere ike ịnata ntaramahụhụ, iwu, ma ọ bụ ọbụlagodi azụmaahịa nwere ike machibidoro ịnabata kaadị akwụmụgwọ dị ka ịkwụ ụgwọ n'ọdịnihu. N'ihi ya, ọ dị mkpa nke PCI Nnọ maka Ecommerce.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Gịnị bụ PCI Compliance na gịnị kpatara o ji dị mkpa maka Ecommerce gị
Otu esi ahọrọ ọrụ nlekọta weebụ
Ihe ndị dị mkpa na atụmatụ azụmahịa maka ndị ọchụnta ego